PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - ESKHALENI:
KUMELE kube yisifundo kwabaningi okwehlele abalandeli bekaizer Chiefs abaphuthwe yingqayizivele yethuba lokubuka bukhoma ikilabhu yabo, esefomini kulezi zinsuku, idudulana nepolokwane City emdlalweni we-absa Premiership izolo ngomgqibelo kusihlwa emoses Mabhida Stadium, ethekwini.
Abalandeli kumele bafunde ukulawula ukudinwa ngoba izinqumo ezithathwa ngokucasuka zivamise ukuba nomphumela omubi ekugcineni.
Kuyinto engafihliwe ukuthi abalandeli bechiefs bebecikwa wukuba khona kukasteve “Mphathi” Komphela ebhentshini lale kilabhu.
Namhlanje bafela isono sokuxabana nalo mqeqeshi ekubeni yena izinto sezimhambela kahle kwibloemfontein Celtic esingabaqashi bakhe abasha.
Kumanje ugiovanni Solinas wase-italy ongumqeqeshi weChiefs, ufela izono zikakomphela kwazise yena ubadinga kakhulu abalandeli njengoba izimpofana sezikhombisa izimpawu zokuhlangana.
Lokhu-ke akuthinti nje ichiefs kuphela kodwa kumele kuthumele umlayezo oqinile kubona bonke abathandi bakanobhutshuzwayo bakuleli.
Ikilabhu ilahlekelwa yizindodla zemali nxa abalandeli bengavu- nyelwa ukungena enkundleni. Le mali iwasiza kakhulu amakilabhu ukuholela abadlali nokuqhuba imisebenzi yansuku zonke ekilabhini.
Ngeke-ke uthi uyayithanda ikilabhu yakho kodwa ube wenza izenzo ezizoholela ekutheni ihlawuliswe izishaqane zemali.
Ubukhotheni ezinkundleni sekuwumkhuba ovamisile ukubonakala njengoba ne-orlando Pirates idlale nebidvest Wits ibukwa yizihlalo ngesizini edlule ngenxa yobundlavini babalandeli.
Amazulu FC ahlawuliswe imali enkulu ngenxa yokuziphatha budlabha kwabalandeli ngesikhathi ebhekene nemamelodi Sundowns ngesizini edlule.
Ngeledlule abathandi bosuthu batalabhe umlandeli ojikijele enkundleni ngesikhathi le kilabhu idlala nemaritzburg United.
Asikukhuthazi ukuzibambela umthetho ngezandla, kodwa kumqoka ukuba abalandeli bavikele isithunzi sekilabhu yabo kosikhotheni abaziphatha budlabha ngoba lokhu kuholela ekutheni kuhlawuliswe ikilabhu.
Ezinye izinhlanga zizoqhubeka nokungalubhadi emidlalweni kanobhutshuzwayo ngenxa yendlela abantu abaziphatha ngakhona.
Itheku lilahlekelwe yimali eningi ebizongena ukuba abalandeli bebevunyelwe ukuya enkundleni. Leli dolobha belizohlomula kakhulu kwazise nepirates ibiqhathwe nosuthu izolo ngoMgqibelo ebusuku eking Zwelithini Stadium, emlazi.
Ukuza kwalezi zinkuzi zasesoweto ethekwini ngempelasonto eyodwa, kuwufukula kakhulu umnotho wakuleli dolobha njengoba kufika abantu abaqhamuka cishe kuzona zonke izifundazwe zaseningizimu Afrika bezozibuka.
Kubalulekile-ke ukuthi kukhona konke esikwenzayo, sicabangele isimo somnotho esintengantengayo.
Masiyeke ukuthatha izinqumo ngokudinwa ngoba ekugcineni zibuye zigadle kuzwele futhi kithina.